ara-pitsaboana elektronika nitarika - China Fastpcba Teknolojia
No hanampiantsika ny an'izao tontolo izao nanomboka tamin'ny 1983 mitombo
Safety sy Fiarovana
Safety sy Fiarovana Soft board
hery fifandraisana PCB
indostrialy automatique nitondra
fitsaboana elektronika nitondra
FASTPCBA Technology Co., Ltd dia mpanamboatra PCB matihanina ao Shina, Shenzhen. Amin'ny 14 taona ny fampandrosoana, FASPCBA mivadika ho iray kilasy voalohany mpanamboatra ny HDI PCB, miaraka amin'ny famokarana fahaizany 35.000 metatra toradroa. FASTPCBA dia manome kalitao avo sy ny PCB PCB niteraka fivoriambe fanompoana, anisan'izany ny singa eny ifotony, ny asa fitiliana, conformal coating sy ny vahoaka tanteraka ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao. Ny raharaham-barotra tetikady mahery vaika dia mahatonga antsika mba hanolotra asa mifaninana avo ho an'ny ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd dia mpanamboatra PCB matihanina ao Shina, Shenzhen. Amin'ny 14 taona ny fampandrosoana, FASPCBA mivadika ho iray kilasy voalohany mpanamboatra ny HDI PCB, miaraka amin'ny famokarana fahaizany 35.000 metatra toradroa. FASTPCBA dia manome kalitao avo sy ny PCB PCB niteraka fivoriambe fanompoana, anisan'izany ny singa eny ifotony, ny asa fitiliana, conformal coating sy ny vahoaka tanteraka ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Ny raharaham-barotra tetikady mahery vaika dia mahatonga antsika mba hanolotra asa mifaninana avo ho an'ny isan-karazany, mifaninana mpanjifa fototra. Amin'ny alalan'ny tetika io, isika dia afaka hanao fifadian-kanina, malefaka ho setrin'ny fanapahan-kevitra tsena fanovana toe-piainana sy ny mamorona sy ny tombontsoa sarobidy indrindra ho an'ny mpanjifa.
Raha ny Service, dia manome 7days 24hours amin'ny Internet matihanina Pre-fivarotana, nivarotra sy Ankehitriny-Sale fanompoana hamaha misy fanontaniana momba ny filaminana. Na oviana na oviana, misy fepetra takiana, dia hahazo haingana Reply avy ny tsara ofana sy sariaka fanohanana mpiasa.
Ny tsena lehibe no Eoropa, Etazonia Avaratra, Aostralia, Amerika Atsimo, ary Azia. dia hametraka bebe kokoa mba hanorina bebe kokoa mifandray amin'ny mpanjifa ao amin'ny faritra kokoa. Isika rehetra dia te hanao, dia ny hampifandray izao tontolo izao noho ny vokatra, mba hizara ny sarobidy, sy ny zava-bita Happyness bebe kokoa amin'ny mpanjifa.
PCB sy SMT fiangonana iray-stop fanompoana
FR4, FR4 TG avo, avo matetika, alum, FPC
Min.thickness for anaty sosona
(Cu hateviny dia voailika)
Single / Double: 0,008 0,004 ± "
Tsipìka sy manolan-
Cu ivelany lanja
Inner Cu lanja
PTH lavaka fandeferana
NPTH lavaka fandeferana
Green, fotsy, mainty, mena, manga ...
Min solder saron-tava clearanace
fotsy, mainty, mavo, manga ...
100% Functional fitsapana
X-ray, Aoi Test, Functional fitsapana
singa fototra eny ifotony
Fandeferana ny PCB
Max haben'ny farany board
TSY MOQ (1pcs)
surface Vitao ny
HASL, ENIG, asitrika volafotsy, asitrika tin, OSP ...
Square, boribory, tsy ara-dalàna (amin'ny jigs)
Plastika, vy, lamba
Q1: Inona no fanompoana misy ato aminareo?
FASTPCBA: turnkey manome vahaolana isika anisan'izany ny PCB FABRICATION, SMT, plastika tsindrona & vy, fiangonana farany, fanaovana fitiliana sy ny lanjany-nanampy fanompoana.
FASTPCBA: ny PCB / PCBA asa ireo no tena ho an'ny indostria ao anatin'izany ny Medical, Automotive, Communication.
Q4: Afaka hijery toetra nandritra ny famokarana?
FASTPCBA: Eny, isika dia misokatra sy ny mangarahara eo amin'ny dingana tsirairay amin'ny famokarana na inona na inona afenina. Isika mpanjifa handray-maso ny dingana famokarana, ary jereo ao amin'ny trano.
FASTPCBA: vonona izahay hanao sonia nda vokatry ny mpanjifa lafiny lalàna eo an-toerana sy ny mampanantena ny angon-drakitra mpanjifa foana ao amin'ny tsiambaratelo avo lenta.
FASTPCBA: Fa PCB teny nindramina, azafady manome tahirin-kevitra ny Gerber / antontan-taratasy sy ny famantarana ny fepetra ara-teknika mifandraika amin'izany ary koa misy fepetra manokana raha manana.
Fa PCBA teny nindramina, azafady manome tahirin-kevitra Gerber / antontan-taratasy ary koa Bom (volavolan-dalàna ny fitaovana), ary raha toa ka mila antsika hanao ny asa fitsapana, azafady manome ihany koa ny fitsapana fampianarana / dingana.
FASTPCBA: Delivery teny ny EXW, FCA, FOB, DDU sns rehetra hita mifototra amin'ny notsongaina tsirairay.
FASTPCBA: Raha ny mahazatra dia 24 ora ny 48 ora raha vao mandray anatiny injeniera handinika ny fandraisana ho mpikambana.
FASTPCBA: Tsia, tsy manana MOQ fepetra, dia afaka manohana ny tetikasa manomboka amin'ny prototypes ho bahoaka vokatra.
Previous: manan-tsaina an-trano nitondra
Next: hery fifandraisana nitarika
94v Hitany PCB
94v0 Kanjo Nahita Display PCB
Aluminum Kanjo Nahita PCB
Aluminum PCB Hitany
Aluminum PCB Fa Hitany
Custom Hitany PCB
Malefaka PCB Fa Hitany
Hitany PCB Faritra Design
PCB Hitany Aluminum
PCB Hitany fanamboarana
Round Hitany PCB
Tubi8 Hitany Tower Fampitandremana Light PCB
fitsaboana elektronika PCB
fitsaboana elektronika Soft board
Inona no anton-javatra no mifandray amin'ny ratsy PCBA ...
Inona avy ireo fitsipiky ny PCB fisehon'ny in T ...
Mandra-pahoviana no SMT teny nindramina tsingerin'ny ny T ...